Daaʼuud Ma Cabsanayn | Carruurtaada Wax Bar
Daaʼuud Ma Cabsanayn
Markay cabsi ku hayso maxaad sameysaa?— Malaha hooyadaa iyo aabbahaa baad u tagtaa. Laakiin waxaa jira qof kale oo ku caawin kara. Wuxuu ka xoog badan yahay dadkoo dhan. Ma taqaannaa kaas kuu yahay?— Waa Yehowah Ilaah. Bal aan ka hadalno wiil dhallinyaro ah oo laga sheegay Kitaabka. Wiilkan waxaa la oran jiray Daaʼuud. Muu cabsan jirin waayo wuxuu ogaa in Yehowah mar walba caawin doono.
Daaʼuud ilaa waaguu ilmo yar ahaa waalidkiisa waxay bareen inuu Yehowah jeclaado. Wuxuu ogaa in Yehowah saaxiibkiis ahaa oo uu caawin doono. Tani waxay ku caawisay Daaʼuud inuusan cabsan xitaa mararkay waxyaalo baqdin leh dhacaan. Mar Daaʼuud oo ilaalinayay idihii libaax weyn baa u yimid oo idihii mid ka dafay. Muxuu Daaʼuud sameeyay? Intuu libaaxii ka daba tagay buu afkiisa kala soo baxay nayshii markaana libaaxii wuu dilay! Mar kalena Daaʼuud idihiisii waxaa weeraray xawayaan weyn oo duurka jooga oo loo yaqaanno orso. Daaʼuud kaas xitaa wuu dilay! Yaad u maleysaa inuu Daaʼuud caawiyay?— Yehowah baa caawiyay.
Waqti kale baa jiray uu Daaʼuud geesinnimo weyn muujiyay. Dad loo yaqaanno reer Falastiin baa la dagaalayay reer binu Israaʼiil. Askartii reer Falastiin nin aad iyo aad u weyn baa ka mid ahaa. Magaciisana Goliʼad baa la oran jiray. Ninkan askartii reer binu Israaʼiil iyo Yehowahba wuu ku qosli jiray. Wuxuu ciidammada reer binu Israaʼiil ku yiri: ‘Car ii soo dira nin ila dirira.’ Laakiin reer binu Israaʼiil oo dhan way ka cabsadeen inay la dagaallamaan. Markuu Daaʼuud waxan maqlay wuxuu Goliʼad ku yiri: ‘Anaa kula dagaallami doona! Yehowah baa ii caawin doona waana kaa rayn doona!’ Maad u maleysaa inuu Daaʼuud geesi ahaa?— Geesi weyn buu ahaa. Ma rabtaa inaad ogaatid waxa dhacay?
Daaʼuud intuu wadhafkiisa qaatay iyo shan dhagax oo siman buu u baxay inuu ninka weyn Goliʼad la soo dagaalo. Goliʼad wuu ku qoslay Daaʼuud markuu arkay inuu wiil yar ahaa. Laakiinse Daaʼuud wuxuu ku yiri: ‘Adigu waxaad ii soo qaadatay seef aniguse waxaan kuula imid magaca Yehowah.’ Markaasna intuu Goliʼad ku orday oo dhagax la soo baxay oo wadhafiyay buu wejiga kaga dhuftay. Ninkaas weynaanta badan dhulku ku dhacay oo wuu dhintay! Reer Falastiinna intay aad u cabsadeen ayay carareen. Sidee bay u suuraggashay wiil yar oo Daaʼuud oo kale ah inuu ka rayo nin aad iyo aad u weyn?— Yehowah baa caawiyay Yehowahna si saayid ah buu ninka weyn Goliʼad uga xoog weyn yahay!
Daaʼuud muu cabsanayn waayo wuu ogaa inuu Yehowah caawin doono
Sheekada Daaʼuud maxaad ka baran kartaa?— Cid walba Yehowah baa ka xoog badan. Isaguna waa saaxiibkaa. Marka dambe ay cabsi ku qabato xusuuso inuu Yehowah ku caawin karo sidaad geesi u noqotid!
Sabuurradii 56:3, 4
1 Samuuʼeel 17:20-54
Daaʼuud muxuu sameeyay markay libaax iyo orso soo weerareen idihiisii?
Daaʼuud muxuu ku yiri Goliʼad markuu ku qoslay Yehowah?
Sidee buu Daaʼuud Goliʼad uga rayay?
Muxuu Daaʼuud uga cabsan waayay libaaxii, orsadii iyo ninkii weynaa Goliʼad?
Sheekada Daaʼuud maxaad ka baran kartaa?
Wadaag Wadaag Daaʼuud Ma Cabsanayn